फिक्स्ड इन्डेक्स एन्युनिटीहरू प्रयोग गरेर कर बेनिफिटहरू लिने - साम्प्रदायिक समाचार: अनलाइन व्यापार, थोक र B2B बजार समाचार
मार्च 12, 2020 मार्च 11, 2020 जेनिफर L ब्लग, विशेष समाचार, स्थिर आय, निवेश
RMD करहरूमा बचत गर्न SECURE ऐनको फाइदा उठाउँदै।
फिक्स्ड इन्डेक्स वार्षिकीहरूले तपाईंलाई मार्केट डाउनटर्नस र जोखिमबाट तपाईंको रिटायरमेन्ट सिद्धान्त टोरोटेक्ट गर्न अनुमति दिन्छ।
फिक्स्ड इन्डेक्स वार्षिकीहरूले ग्यारेन्टेड आय, प्लस दीर्घकालीन देखभाल विकल्पहरू प्रदान गर्दछ बढि स्वास्थ्य देखभाल लागतहरू मेडिकेयरले कभर नगरी कभर गर्नको लागि।
स्थिर र फिक्स्ड-अनुक्रमणिका वार्षिकीहरू द्वारा पेश गरिएको कर स्थगित वृद्धि = अर्को वर्ष कम करहरू।
तपाईंको पैसा एक कर स्थगित खातामा भण्डार गरिएको छ जसले तपाईंलाई मिश्रित विकासबाट फाइदा लिन मद्दत गर्दछ। यसको मतलव तपाईले यसमा कुनै आयकर भुक्तान गर्नु हुँदैन तपाईले वार्षिकीबाट पैसा निकाल्नु हुन्न।
तर आफ्नै ट्याक्स रणनीति आफैंमा अप्टिमाइज गर्ने तरिकाहरू पत्ता लगाउन सल्लाह दिईंदैन किनकि त्यहाँ बजारमा विचार गर्ने थुप्रै चल र बीमा एजेन्सीहरू छन्। तपाईको वित्तीय योजनाकारसँग परामर्श गर्न निश्चित गर्नुहोस् तपाईको ट्याक्स रणनीतिलाई ठीक ढंगले गर्नको लागि कि तपाईलाई ठूलो सेवानिवृत्ति योजना बढ्न र आमदनीमा सबैभन्दा बढी चाहिएको बेला आम्दानी उत्पन्न गर्न सक्नुहुन्छ।
यो जहाँ स्थिर अनुक्रमित वार्षिकी आउँदछ। यो एक दीर्घकालीन बचत विकल्प हो जुन तपाईंको पैसालाई करबाट जोगाउँदछ जब कि यौगिक ब्याजको माध्यमबाट वृद्धिको लागि थप अवसर प्रदान गर्दछ। वास्तवमा, प्राय: तय गरिएको सूचकांक वार्षिकीहरूले प्रायः सबै बैंकहरू भन्दा उच्च ब्याज दर प्रदान गर्दछ।
स्थिर अनुक्रमित वार्षिकीका फाइदाहरू के हुन्?
सुरक्षा ऐनको फाइदा लिदै
राष्ट्रपति ट्रम्पले हस्ताक्षर गरेको सुरक्षा ऐनले अब तपाइँलाई तपाइँको 401०१ के, 401०१ बी, आईआरए, वा पेन्सन भुक्तानलाई एक वार्षिकी कर-मुक्तमा रोल गर्न अनुमति दिन्छ। निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईं साइन अप गर्दै हुनुहुन्छ एक योग्य जीवन बीमा कम्पनी यसले तपाईंको लागि तपाईंको आवश्यकताहरू पूरा गर्न सक्छ।
वार्षिकी प्रदान ग्यारेन्टीहरू
यो बजारमा डाउनटर्नरबाट तपाइँको सिद्धान्त रकम बचाउनको लागि एक उत्तम तरिका हो, उच्च ब्याज दरहरूको अवधिको अवधिमा उनीहरूको सिद्धान्त मान हराउने ज्ञात बन्धनहरूको विपरीत, तपाइँको अनुक्रमणिका वार्षिकीको ग्यारेन्टी छ।
जे होस् तपाईको वास्तविक प्रतिफल एक अनुक्रमणिका को प्रदर्शन मा आधारित छ, जस्तै NASDAQ कम्पोजिट, तपाइँको मूल जम्मा अस्वीकार हुँदैन सूचकांक नकारात्मक प्रदर्शन गर्नु पर्छ। यो बजारमा डाउनटर्नरबाट आफ्नो सिद्धान्त रकम बचाउनको लागि एक उत्तम तरिका हो, उच्च ब्याज दरहरूको अवधिको अवधिमा आफ्नो सिद्धान्त मान हराउने ज्ञात बन्धनहरूको विपरीत, तपाईंको अनुक्रमणिका वार्षिकीको मूल्य ग्यारेन्टी गरिएको छ।
यद्यपि यो ध्यान दिन लायक छ, तपाईका सबै ग्यारेन्टीहरू बीमा कम्पनीको दावी भुक्तान क्षमताको अधीनमा हुनेछन्। तपाइँको वित्तीय योजनाकार ध्वनी वित्तीय योजनामा ​​आधारित तपाईंको लागि आदर्श बीमा प्रदायक निर्धारण गर्न सक्षम हुनेछ।
आय क्रेडिट गरियो
एक पटक अवधि समाप्त भएपछि, तपाइँको सबै आयहरू जम्मा हुनेछन्, जुन बिन्दुमा तिनीहरू नकरात्मक अनुक्रमणिका प्रदर्शनबाट प्रभावित हुन्छन् (तपाइँको मूल जम्मा समाप्त हुँदैन)। तपाईंको आय टोपी दर द्वारा सीमित गर्न सकिन्छ। केही वाहकहरूले सुविधाहरू पनि प्रदान गर्दछ जसले तपाईंलाई तपाईंको अवधिमा राखिएको सूचकांक उच्चको फाइदा लिन दिन्छ।
विकासको सम्भावना विभिन्न सूचकांक र क्रेडिट विधिहरूको साथसाथै निश्चित ब्याज विनियोजनको माध्यमबाट महसुस हुन्छ। तपाईले दुबैलाई मिलाउन सक्नुहुन्छ आफ्नो पैसाबाट अधिकतम फाइदा लिन।
निश्चित वार्षिकीको लागि साइन अप गर्नु अघि, यो तपाईंलाई थाहा हुनु आवश्यक छ कि तपाईंलाई के विकल्पहरू उपलब्ध छन् तपाईंको पैसाको उत्तम सम्भव लाभ लिन मद्दत गर्न।
जेनिफर ल्यांग वित्तीय सेवाहरू एक स्वतन्त्र एजेन्ट हो र निकट प्रतिस्पर्धी जीवन बीमा क्यारियर दरहरूलाई करीव निगरानी गर्दछ तपाईंलाई उत्तम सम्भव फिक्सड इन्डेक्स एन्युटी प्राप्त गर्न मद्दत गर्न। भित्र जाऊ स्पर्श हामीसँग एक वित्तीय योजना डिजाइन प्राप्त गर्न जुन तपाइँको विशेष परिस्थितिहरूको लागि उत्तम कार्य गर्दछ।
वार्षिकी वार्षिकी सांप्रदायिक समाचार कोरोनाभाइरस वित्तीय सल्लाह आर्थिक सल्लाहकार वित्तीय योजनाकार कसरी वार्षिकी कार्य गर्दछ सेवानिवृत्ति सेवानिवृत्ति योजना शेयर बजार कर
Boom! पुतिन एक चरण रूसको लाइफटाइम शासक बन्न नजिक छ